पप गायक अनिल सिंहले किन आत्महत्या गर्छु भने ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
‘प्रेम पत्र’, ‘इन्जिन गाडीमा’, ‘घिनी घिनी’, ‘आइ लभ यु’, ‘सक्छौं भने’, ‘प्रेमिका’ र ‘विल यु म्यारी मि’ जस्ता दर्जनौ हिट गीत बाट एक ताका चर्चाको शिखरमा रहेका गायक अनिल सिंह पछिल्लो समय चर्चा बिमुख जस्तै थिए । तर अगष्ट ६ तारिखमा उनले गरेको एउटा पोष्टले उनि फेरी चर्चामा ल्याएको छ । उनले आत्महत्या गर्ने सोच !!!!!!! शिर्षकमा लामो पोष्ट गर्दै प्रतिलिपी अधिकार र रोयल्टीको बिषय उठान गरेका छन । उनले मलाई मेरो हक चाहियो । मर्नु अघी देउन हजुर ! भनेर सार्बजनिक अपिल गरेका छन । अनिलले आफूले लगानी गरेको आफना सृजनामा समेत आफनो अधिकार नभएको गुनासो गरेका छन । इन्द्रेणी क्यासेट सेन्टर, म्युजिक डटकम, सम्झना अडियो भिडियो र रियाज म्युजिकसँग पाँच वर्षे सम्झौता समाप्त भइसकेपछि सबै गीतमा आफ्नो अधिकार हुनेपर्ने तर्क उनको छ ।
म्युजिक कम्पनीहरुले युट्युबमा प्रतिलिपि अधिकार दाबी गरेपछि उनको च्यानललाई युट्युबले निलम्बन गरेको उल्लेख गरेका छन । अनिलले यो बिषयमा सामजिक सञ्जालमा गुनासो र समस्या ब्यक्त गरेपनि यो समाचार समाचार तयार पार्दा सम्म उनले सम्बन्धित संस्थाहरु प्रतिलीपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय, संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल, प्रस्तोता समाज नेपाल , उत्पादक समाज नेपाल, संगीतकार संघ नेपाल ,गीतकार संघ नेपाल जस्ता संघ संस्था संग आधिकारिक परामर्ष भने गरेका छैनन । अनिलले संगीत रोयल्टी संकलन समाजक नेपाल र प्रस्तोता समाज नेपालको सदस्यता लिएको रेकर्ड पनि भेटिएन । तर रेडियो नेपाल र टेलिकम बाट प्राप्त रोयल्टीमा उनका केहि गीतहरुको हिस्सा भेटिएकोछ । यसै बिषयमा संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीसंग प्रतिकृया माग्दा उनले समाजको कार्यक्षेत्र भित्र परेका र समाजको कार्यालयमा सम्पर्क गरी लेखापढि भै आएका बिषयमा बाहेक सामजिक सञ्जाल , सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बिषय वा अन्यकुनै माध्यम बाट चर्चा चलाइएका बिषयमा समाजको सरोकार नरहने बताए । त्यसैगरी प्रस्तोता समाज नेपालका उपाध्यक्ष शिव हमालले पहिले त अनिले सदस्य बन्नु पर्ने र रोयल्टी संकलनका लागि बिवरण दिनु पर्ने सुझाव दिए ।
त्यसपछि उनका गीतबाट संकलन भएको रोयल्टी उनलाई प्राप्त हुने बताए । प्रस्तोता समाजले अहिले वितरण गरिरहेको रोयल्टी कलर रिङ ब्याक टोन को मात्र रोयल्टी भएको र यो क्षेत्रको रोयल्टीमा अनिल सिंहको गीतको रोयल्टी नदेखिएको स्पष्ट पारे । त्यसैगरी संगीतकार संघका अध्यक्ष लक्ष्मण शेषले हरेक सर्जकको आर्थिक तथा नैतिक अधिकार सुरक्षीत हुनै पर्ने र सर्जक पहिले सचेत हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि सरोकारवाला अधिकार प्राप्त संघ संस्थासंग परामर्ष र बिधागत संस्थासंग आबद्ध हुन सुझाव दिए । शेषले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरेर मुद्धा त उठने तर समाधान नहुन भएकाले समाधान खोज्न तर्फ लाग्न सुझाव दिए ।
नेपालको कानुनले आत्महत्याको स्विकृति दिएको छैन । यसरी आत्महत्या गर्ने सोंच बनाएको सार्बजनिक गर्न नमिल्ने केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ । त्यसैगरी अपराध महाशाखाले यस्तो बिषयमा अनिलका आफन्तले उजुरि दिएमा समस्याको कानुनि निराकरणको बाटो निस्कने सुझाव दिएको छ । अनिलले भने आफूले मर्नका लागि नभै सिम्बोलिक कुरा ब्यक्त गरेको प्रतिकृया दिएका छन । उनले अझै पनि कलाकारहरु चुप चाप बस्ने हो भने यो देशमा आत्महत्या गर्ने कलाकारको सख्या धेरै नै पुग्ने जिकिर गरेका छन ।
यस्तो लेखेका छन अनिलले फेसवुकमा
आत्महत्या गर्ने सोच !!!!!!!
एक चोटी मेरो आवाज सुनिदेउ
देशमा हजारौको सख्यामा एफएमहरु छन ।सयौको सख्यामा टेलिभिजनहरु पनि रहेका छन । आजको दिन सम्म एक सुका , एक ठेली पनि रोयल्टी पाएको छैन ।
एउटा ठुलो आश यु टुयुवमा आफ्नै गीत राखेर कमाउने अवसर पाएको त्यो पनि केश गरेर च्यानल बन्द गर्ने रे । च्यानल सस्पेन्स । म यो जानकारी गराउन चाहान्छु कि मेरो स्वर , मेरो संगीत , मेरो शब्द रहेको मेरो गीत । मैले खर्च गरेर होस या कम्पनीले बनाएको भिडियो ,अडियो इन्द्रेणी क्यासेट सेन्टर, म्युजिक डटकम, सम्झना अडियो भिडियो र रियाज म्युजिकसँग मात्र ५ बर्षको सम्झौता गरेको छु र त्यस पछी सबै मेरो अधिकार रहन्छ ।
त्यसैले यु टुयुवमा राख्न पाउने मेरो हक र अधिकार हो । बहुमुल्य मधुर सम्झना एल्बमको एक पैसा नि पाछैन उल्टै सबै मैले खर्च गरेको । भिडियो सबै मेरो हक हो, सम्झना बाहेक ्र लौ न हो !!
प्लिज प्लिज यो यु टुयुवको राम्रो जानकारी भएको व्यक्तिको आवश्यता परेको छ । कहिले सम्म यो अन्याय अत्याचार सहनु पर्ने । ज्यानै पो त जाने भो हजुर । मलाई मेरो हक चाहियो । मर्नु अघी देउन हजुर ! एफएम, टेलिभिजनको रोयल्टिले बिहानको छाक र टुयुवले बेलुकीको एक छाक खान पाउ । मात्र यही छ ईच्छा । अझै पनि कलाकारहरु चुप चाप बस्ने हो भने यो देशमा आत्महत्या गर्ने कलाकारको सख्या धेरै नै पुग्छ । यो मेरो लागि मात्र होईन सबै कलाकारको भलाईको लागि । सायद यो पुरानो कलाकार सबैले झेली रहेको प्रोव्लम हुनुपर्छ । यो पहल दर्शक , श्रोताबाट, हजुरहरुको आवाजबाट हुन्छ्र एफएम टेलिभिजनलाई फोन गरेर सोध्नुस ! तपाईंले फर्माइस गर्नु भएको गीतले , तपाईंको प्यारो कलाकारले रोयल्टी पायो कि पाएन । दर्शक , श्रोता हजुरहरुले बोल्दे पुग्छ । हजुरहरुले हेर्दे पुग्छ । सेभ मि यु सेभ अस , सेभ नेपाली म्यूजिक ।
साउन २२ गते आईतबार एकताका युवा पुस्ताका लोकप्रिय बनेका गायक अनिल सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेखे जसमा उनले आफूमा आत्महत..